Iimpawu zeSF zandisa ingqokelela yayo ye icon | Ndisuka kuMac
Iimpawu ze-SF Sisixhobo esisetyenziswa kakhulu ngabaphuhlisi besicelo kwindawo ye-Apple, kodwa ayaziwa kubasebenzisi abangacwangciswanga, kodwa esinokusisebenzisa ngalo naliphi na ixesha "ukwenza ngokwezifiso" i-icon engaqhelekanga kwiMac yethu ngokuthanda kwethu.
Lithala elikhulu leencwadi Ii-icon eziyilwe nguApple, ukuze abaphuhlisi bazisebenzise kwizicelo zabo. Ngethamsanqa, inkampani ivumela nawuphi na umsebenzisi ukuba ayikhuphele kwaye ayisebenzise, ​​ngaphandle kwesidingo sokuba ube ngumphuhlisi osemthethweni wesicelo se-Apple. Ngoku ihlaziywe ngokwandisa ikhathalogu ye icon.
Kwi-WWDC 2021, i-Apple yazisa inguqulelo entsha yekhathalogu yeempawu ze-SF ezidumileyo ze-3, ezinee-icon ezintsha ezingaphezu kwama-600. Ukulandela ukuqaliswa ngokusemthethweni ngoSeptemba, uhlaziyo olutsha lusanda kukhutshwa, i Iimpawu ze-SF 3.1, engabandakanyi kuphela ukulungiswa kwebug, kodwa yongeza ii-icon ezininzi kwi-app, ukusetyenziswa kunye nokuzonwabisa ngabaphuhlisi be-Apple app.
Kwabo bangaqhelananga nesicelo esinjalo, iiMpawu zeSF lithala leencwadi elingaphezu kwe Iimpawu ezi-3.100 kunye nee-icon ezinokusetyenziswa ngabaphuhlisi kwiiprojekthi zabo. Ukongeza kwii-icon ezintsha ezingama-600, iiMpawu ze-SF ze-3 zibonisa ukwenziwa kombala ngcono kunye nenkxaso ephuculweyo yeesimboli zesiko.
Lithala elikhulu elinee-iyikhoni ezahlukeneyo ezingaphezu kwama-3.100. Yakhelwe ukudibanisa ngaphandle komthungo kunye neSan Francisco, umthombo wenkqubo yamaqonga e-Apple. Iimpawu ziyangena iisayizi ezisithoba kunye nezikali ezintathu, kwaye zilungelelaniswe ngokuzenzekelayo neelebhile zokubhaliweyo. Zingathunyelwa ngaphandle kwaye zihlelwe kwi-vector graphics editing tools ukwenza ngokukhululekileyo iisimboli zesiko.
Iimpawu ze-SF 3.1 zinokukhutshelwa kwisiza Kwiwebhu nguMphuhlisi we-Apple. Iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi. Inye kuphela efunekayo IMac ene-macOS Catalina okanye kamva ukufaka iiMpawu zeSF 3, kwaye uqale ukusebenzisa ii-icon zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Ezinye iiNkqubo zeMac » Iimpawu zeSF zandisa ingqokelela yayo ye icon
U-Olivier Martinez ujoyina i-cast of Maya Rudolph's series